» डब्ल्यूएचओबाट अमेरिकाको बहिर्गमनः अमेरिकाको ‘खराब’ र विश्वका लागि ‘निराश’ समाचार
२६ असार २०७७, शुक्रबार ०७:४४
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठनकोे सदस्य राष्ट्रबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकले यो समाचारको पुष्टि गर्दै भनेका छन्, ‘अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिएको व्यहोराको पत्र पठाएको छ । यसको प्रक्रिया पुरा हुन सन् २०२१ को जुनसम्म लाग्ने छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थापना सन् १९४८ अप्रिल ७ मा भएको थियो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभाका केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो संगठनको विश्वभरि १५० बढी फिल्ड अफिस छन् । १९४ यसका सदस्य राष्ट्रहरु छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना भएकै वर्षको जुन २१ देखि अमेरिका यस संगठनको सदस्य राष्ट्र थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरि जनस्वास्थ्य स्थितिको अनुगमन, विश्लेषण, जोखिम पहिचान, सदस्य राष्ट्रहरुलाई स्वास्थ्य प्रविधि सहयोग तथा हस्तान्तरण, निरोधात्मक क्रियाकलापमा समन्वय र विश्व स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा लगायतका काम गर्दछ ।
विगतमा विफर, हैजा, मलेरिया, पोलियो, इवोल, एड्सजस्ता महामारी तथा संक्रमक रोगहरुको नियन्त्रण तथा निराकरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अद्वितीय भूमिका गरेको थियो । विद्यमान कोभिड–१९ को महाव्याधी नियन्त्रण गर्न यस संगठनले ठीक भूमिका गर्न नसकेको आलोचना हुँदै थियो ।
अमेरिका यस संगठनको एक महत्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र हो । यसको कुल बजेटमा १५ प्रतिशत अनुदान अमेरिकाले एक्लै दिँदै आएको थियो । त्यो रकम गत वर्ष ४६ करोड डलर थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको बजेटमा युरोपियन युनियनले ११ प्रतिशतको योगदान गर्दछ भने चीनको योगदान एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । चीनले गत वर्ष करिब २ करोड डलरको योगदान गरेको थियो ।
कोभिड–१९ प्रारम्भ भएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प संगठनसँग असन्तुष्ट थिए । अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनमाथि चीनको अनुकुलतामा काम गरेको, कोरोना भाइरसबारे विश्वलाई ठीक समयमा ठीक जानकारी नदिएको, चीनसंग मिलेर सूचना लुकाएको, विश्व समुदायलाई गुमराह गरेको, कोरोना प्रतिरोधको सही मानक निर्धारण गर्न नसकेको, ती गल्तीकोे कारण अमेरिका र विश्वमा धेरै ठूलो क्षति भएको, यसको दोषबापत् चीनमाथि क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको जस्ता आरोप लगाउने गरेको थियो ।
गत मे को २९ मा ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिने र संगठनलाई दिँदै आएको अनुदान रकम विश्वभरि छरिएका कल्याणकारी संस्थाहरुमार्फत् खर्च गर्ने धम्की दिएका थिए । अमेरिकाले चालू वर्षको अनुदानको पनि ५० प्रतिशत रकम मात्र विश्वस्वास्थ्य संगठनलाई भुक्तान गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको महानिर्देशकमा अहिले इथियोपियाली राजनीतिज्ञ तथा जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता डा. टेड्रोस अधोनम बहाल छन् । उनी यो संगठनको नेतृत्व गर्ने पहिलो अफ्रिकी नागरिक हुन् । महानिर्देशक ट्रेडोसको कार्यशैलीलाई ट्रम्पले खासै मन पराइ रहेका थिएनन् । टेड्रोस संगठनको महानिर्देशक हुनुअघि इथियोपियाका स्वास्थ्य र विदेशमन्त्री रहिसकेका थिए ।
पछिल्लो समय जिबुटी र इथियोपियालाई अफ्रिकामा चीनका राम्रा सहयोगी राष्ट्र मानिन्छ । जिबुटीमा चीनको पहिलो देशबाहिरको ‘एयर बेस’ छ भने इथियोपियाको विकासमा चिनियाँ लगानीको उल्लेखनीय भूमिका छ । तर, टेड्रोस चीनको नभएर अफ्रिकी युनियनको प्रस्तावमा संगठनको महानिर्देशक भएका थिए । सन् २०१७ को जुलाईदेखि टेड्रोस संगठनको महानिर्देशकमा कायम छन् ।
सञ्चार माध्यमहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणालाई अमेरिकाको ‘ब्याड’ र विश्वका लागि ‘स्याड’ समाचार भनेको छन् । द टाइम्सले ‘संगठनका लागि अमेरिका एक सदस्य राष्ट्र मात्र हैन, एक स्टार खेलाडी हो, अमेरिका विनाको विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्न’ लेखेको छ ।
स्वयंं अमेरिकामा भने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पोलिसीले ट्वीट गर्दै ‘ट्रम्प प्रशासनको सनकपूर्ण निर्णय’ भनिकी छन् भने आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि डेकोक्र्याटिक उम्मेदवार जो वाइडनले ‘आफूले जितेमा ट्रम्पको निर्णय खारेज गर्ने र अमेरिका पुनश्चः डब्लुएचओमा फर्किने’ ट्वीट गरेका छन् ।
महानिर्देशक टेड्रोसले भने निरास प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विश्व जनस्वास्थ्यका लागि अमेरिकाको योगदान अद्वितीय रहँदै आएको छ । मलाई आशा छ अमेरिका आफ्नो गौरवपूर्ण योगदानको इतिहासबाट विमुख हुने छैन । संगठनमा आफ्नो संलग्नतालाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’
अमेरिकाले हात झिकेपछि संगठनको आर्थिक स्थिति र भूमिका के हुन्छ ? यसबारे विभिन्न विश्लेषण गर्न थालिएको छ । एकाथरी विश्लेषकका अनुसार चीनले आफ्नो भूमिका र आर्थिक योगदान बढाउन सक्दछ । अर्कोथरि विश्लेषकका अनुसार तत्काल चीनले त्यस्तो निर्णय सायदै गर्दछ । चीनले हात थाम्न नसके विश्व स्वास्थ्य संगठनको अस्तित्व नै संकटमा नपरे पनि भूमिका र प्रभावकारिता भने खुम्चिन्छ । त्यसको असर तेस्रो मुलुकका अल्पविकसित देशको जनस्वास्थ्यमा व्यापक रुपमा पर्दछ ।
तेस्रोथरी विश्लेषकका अनुसार ‘पैसा भन्दा पनि अमेरिकाको संलग्नता र सहकार्य महत्वपूर्ण हो । अमेरिका विनाको विश्व स्वास्थ्य संगठन त्यसै फिका हुन्छ । अमेरिका यसरी नै विश्वप्रतिका आफ्ना दायित्वबाट भाग्दै जाने हो भने अमेरिकालाई नै हानी हुन्छ, अमेरिका विश्वको नेतृत्व गर्न लायक राष्ट्र रहँदैन ।’
कोरानाको महाब्याधीका बीच जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र लगानी झनै बढ्नु पर्ने समयमा अमेरिका फिर्ता हुने र साँघुरिने बाटोमा लागेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । साझापाेष्टबाट साभार गरिएकाे विचार ।
ज्यान गए जाओस्, तर ‘लज्जा ‘ नजाओस्
नेपालको पासपोर्ट विश्वकै कम शक्तिशाली पासपोर्टहरुको सूचीमा
नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीबीच नयाँदिल्लीमा बार्ता
ट्रम्पको युट्युब च्यानल एक साता सस्पेन्स
नेपाललाई काेराेना बिरुद्धकाे खाेप उपलब्ध गराउन रुस तयार